Chekwaa 30% na ndenye aha Prototyping Mobile
Ekwenyeghi m na m nwalere igwe nyocha dị mfe karịa Fluid. Kpọrọ, ị ga- nye ha nchịkọta akụkọ nyocha ule, ọ dị mfe nghọta, kensinammuo ma nwee pallet siri ike nke ịdọrọ na dobe njirimara ngwa ọrụ ndị na-adaba na ntanetị ma nwee oke ọgụgụ isi.
Fluid nwere ngwa ọkpụkpọ omenala maka gam akporo, iPhone na iPad. Ha na-ahapụ gị ka ị wulite ihe ngosi ọtụtụ ihuenyo ejikọtara, na-ebupụ ihuenyo ahụ, tinye mmegharị ahụ na ntụgharị site na swipe, kpatụ, kpatụ abụọ, slide, ịjụ oyi na ntụgharị. E wezụga ihe karịrị iOS 2,000 dị njikere, gam akporo, Windows 8 na wijetị UI wiwi waya - ị nwekwara ike bulite ihe oyiyi gị.
Martech Zone ndị na-agụ nwere ike inweta 30% kwụsịrị nke ndenye aha ọnwa 6 maka Fluid UI Atụmatụ ndị ọrụ na njikọ njikọ anyị!
Dabere na atụmatụ ị họrọ, ịnwere ike ịnwe ọtụtụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike, nkwado na / ma ọ bụ nkwado email, ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ntanetị na-arụ ọrụ. Atụmatụ ọ bụla na-abịa na-enweghị ọrụ na-adịghị arụ ọrụ, ibe na-akparaghị ókè kwa oru, akụkọ ihe mere eme, ikike ịnwale na ngwaọrụ, na ịkekọrịta maka mmekorita otu. Fluid na-enyekwa ihe ụlọ ọrụ n'elu ikpo okwu dị maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ.
Tags: androidokpukpu abụọusoro droidichabotụgharịammiri mmiriọmụmụ uiiosiOS prototypingipad prototypingiphone prototypingmobile prototypingprototypingnchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọslideswipetapUI prototypingwindo 8waya